Top Events of the Caribbean
Ny Krismasy sy ny Taona Taona dia ampahany amin'ny hafalian'ny volana Desambra
Ny fikarakarako ny hetsika goavana indrindra amin'ny volana Desambra, ny fety sy ny fialan-tsasatra any Caribbean dia mifantoka, mazava ho azy, amin'ny andron'ny Krismasy sy ny taom-baovao , fa misy ihany koa ny antsipiriany momba ireo hetsika ara-kolotsaina hafa tsy maintsy atao mandritra ny volana.
Sainan'i Lucia. © Wikipedia
Ireo antoko sy paradisa nanodidina ny National Day tao St. Lucia, anisan'izany ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena, ny Fetin'ny Light, ny fetibe fankalazana, ny fetiben'ny tsena ary ny fety. Ny andron'ny firenena dia 13 oktobra, fa ny ankamaroan'ny volana dia mandeha amin'ny fety, mifangaro amin'ny fankalazana ny Krismasy sy ny Taom-baovao.
Fetiben'ny sarimihetsika Bahamas International. © BIFF
Ity no nosy nosoratanao "tsy misy vanim-potoana": BIFF dia fetiben'ny sarimihetsika fanta-daza manintona ireo sarimihetsika Hollywood toa an'i Nicolas Cage sy Sean Connery ary koa ireo tale mpitantana izay manahy ny hampiseho ny sarimihetsika. Mandingana ny 6-13 desambra ary ahitana horonan-tsarimihetsika, fifanakalozan-dresaka, ary hetsika goavana ao Nassau sy ny Nosy Out .
Ny Andron'i Nicholas tamin'ny andron'i Nicholas tany Holandy
Sinterklaas sy Zwarte Piet ao Curacao. © Bob Curley
Alaivo sary an-tsaina ny sainan'i St. Nicholas (Sinter Klaas) izay nitaingina soavaly fotsy ary nodiavin'ireo sivily Zitterte Pete tamin'ny 5 Desambra, St. Nicholas Eve, ao Curacao , Aruba , St. Maarten , ary Bonaire . Ity no andro anirian'ny ankizy Holandeana tsara ny hahita kiraro feno fanomezana, fa ny tahotra mahamenatra kosa dia natsipy tao anaty lafain'i Zwarte Pete ary nentina tany Espaina.
Bahamas Junkanoo dancer. © Bahamas Ministry of Tourism
Matetika ny Alakamisy faharoa tamin'ny volana Desambra, ny Junior Junkanoo Parade dia manasongadina ny talentan'ny mpilalao baolina Bahamian Junkanoo manaraka. Saingy tsy zavatra tsotra ny ankizy: ny ankizy dia mianatra an'i Junkanoo any Bahamas amin'ny elanelan'ny ray aman-dreniny amin'ny vanim-potoana maimbo, ary ny mpandihy Junioranoo dia hampitombo ny mpitsidika amin'ny fahaiza-manaony.
26 Desambra ny andro fankalazana ny fetibe (tsy fivavahana) any Bahamas, satria izany no mitranga amin'ny alahady manerana ny nosy Bahamas amin'ny alàlan'ny baolina kitra Junkanoo, mampiseho ny vondrona junkanoo tsara indrindra amin'ny fikarakarana azy ireo amin'ny dihin'izy ireo. Manomboka amin'ny 2 maraina ny paradisa, aorian'ny famaranana ny Krismasy Krismasy amin'ny mamatonalina, ary manome fankalazana feno hafaliana ny fankalazana ny nahaterahan'i Kristy.
Ny Festival Carriacou Parang Festival ao Grenada
Ny Santa Claus dia hita ao amin'ny Festival Parang 2010. © Komitin'ny fankalazana ao Grenada Carriacou Parang
Nandritra ny 14 ka hatramin'ny 14-16, nankalaza ity fetiben'ny mozika fanao isan-taona ity ny tarika misy eo an-toerana sy ny faritra ho an'ny fifaninanana isan-taona izay manome voninahitra ny mozika mahazatra nentim-paharazana ao amin'ny nosy Carriacou, manakaiky ny morontsirak'i Grenada. Na eo akaikin'ny Krismasy, ny mozika percussion-driven dia fantatra amin'ny tononkira indraindray. Saingy misy lalao fialan-tsasatra ihany koa - mandehana.
Clown costumes tao amin'ny Fetiben'ny Karnavaly St. Kitts. © St. Kitts Tourism Authority
Ny nosy Karaiba rehetra dia misy karnavaly karazany ; Ny St. Kitts dia tsy manan-tsahala satria mihazakazaka amin'ny Krismasy sy ny Taom-baovao (midika Desambra - Jan. 2) ary fety sy fety fankalazana ny fireharehan'ny firenena. Ireo heverina ho zava-dehibe dia ahitana mpilalao horonantsary, mozika j'ouvert, sakafo ara-tsakafo, ary antoko.
Ny mpihira Alicia Keys dia hanasongadina ny Festival Cayman Jazz 2009. © Cayman Jazz Festival
Ny Festival Cayman Jazz dia tsy manana ny tantaran'ny ankamaroan'ireo fety mozika hafa any Karaiba, saingy mihoatra noho ny fananganana rindran-kira amin'ny lohan-doha lehibe, toa an'i Alicia Keys, Peabo Bryson, ary Oleta Adams. Nifindra tany amin'ny foibe fampisehoana vaovao tao amin'ny tranobe Camana Bay tany Grand Cayman ny fetibe vao haingana.
Ny taom-baovao, Jost Van Dyke, Nosy Virijiny Britanika
Foxy an'ny Foxy Fo, Jost Van Dyke, Nosy Virijiny Britanika. © Board of the British Tourist Board of Virgin Islands
Antoko ary mandihy mandritra ny roa andro sy farafahakeliny, fety eo amin'ny fritters conch sy ny biriky, avy eo dia matory daholo izy rehetra eny amoron-dranomasina. Ity tsara tarehy ity dia mamintina ny Antoko 30-31 taona ho an'ny taona taloha - baolina saron'ny baolina kitra ao amin'ny Foxy's Bar ao Jost Van Dyke ao amin'ny Nosy Virijiny Britanika .
Festival de las Mascaras, Puerto Rico
Festival de las Mascaras, Hatillo, Puerto Rico. © Oscalito tao amin'ny Flickr
Ny tanànan'i Hatillo ao amin'ny morontsiraka avaratr'i Puerto Rico dia manomana io fetibe fanao isan-taona io amin'ny 28 Desambra, izay manasongadina mpanakanto sarimihetsika ao amin'ny filaharam-bolo Mardi Gras. Ny fetibe dia manana ny fiorenany ao amin'ny fombafomba tranainy Canary fahiny izay manome voninahitra ny famonoana an'i Herod ny tsy manan-tsiny amin'ny fomba hamonoana an'i Jesoa Kristy.
Karazan'ny mpilalao baolina kitra sy fanatanjahantena
Ahoana no hijanonana ho azo antoka sy azo antoka amin'ny fialan-tsasatra Karibeana?
Sand, Masoandro ary Snorkeling ao amin'ny nosy Buck Croix
Ahoana ny fomba hanomanana ny dia amin'ny fetibe karnavaly any Karaiba
Mahagaga, fa ny Volcanoes sy ny horohoron-tany dia mety hisy fiantraikany any Karaiba
Ny Oklahoma River sy ny District Boathouse Oklahoma City
Milavoukee's 10 tsara indrindra sakafo maraina
Tempolin'ny 10 000 Buddhas
Fitsipika momba ny ladoan'i Angletera - Inona no azonao entina any Angletera?
Ny trano tsara indrindra 5 Star ao Mumbai avy any Colaba mankany Juhu
The New Year's Eve Party Parties in Los Angeles 2017-18
Montreal Gay Village: Torolalana ho an'ny tanànan'i Montreal
Toerana Lehibe hitadiavana an'i Santa ao Columbus
Plant Landscape Easy Landscape
Toeram-pisakafoanana any Atsinanana
Bodie, Kalifornia: Ny tanàna tsara indrindra any andrefana
Riverdale Farm Visitors Guide